Nambarka Iskudhafka Cimilada iyo Iskoolada (Dib-u-eeg Degdeg ah)
Chemistry Dib-u-eegista Degdegga ee Macluumaadka Atomic
Noocyada Atomic iyo tirada calaamadaha atomi waa laba fikradood oo muhiim ah oo ku saabsan kiimikada. Halkan waxaa ah dib-u-eeg deg-deg ah oo loogu talagalay waxa loola jeedo tirada cufnaanta atomiga iyo tirada atomarka, iyo sidoo kale sida dhabta walxaha dhabta ah ee la xidhiidha lambarka atomiga.
Z waxaa loo isticmaalaa in lagu calaamadiyo lambarka atomiga ee atom.
Z = # of protons ee atom ah
A waxaa loo isticmaalaa in lagu calaamadiyo tirada cufnaanta atomiga (sidoo kale loo yaqaano cufnaanta atomiga ama culeyska atomiga ) ee atom.
A = # protons + # nutrons
A iyo Z waa qiyamka ugu hooseeya.
Marka qiyaasta dhabta ah ee atomka lagu sheego amu ( unugyada tirada atomiga ) ama g / mol markaas qiimaha waa ku dhow yahay A.
Miyay Isku-dhafan yihiin Noocyada Atomic Mass iyo Atoma?
Haa iyo maya. Haddii aad ka hadlaysid muunad ka mid ah isotope ee halbeeg, lambarka atom-yada iyo xajinta atomiga waa mid aad u dhow ama isku mid ah. Kiimikada hordhaca ah, waxaa laga yaabaa in ay fiican tahay in ay ka fikirto in ay la mid tahay wax isku mid ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira laba xaaladood oo ay ka kooban tahay maadooyinka proton iyo nutrons (tirada nambarka atom-yada) ma aha mid la mid ah qiyaasta atomiga!
Miisaanka wakhtiyadeed, masska yaryar ee liiska lagu qoro ee loo yaqaan 'element' wuxuu ka tarjumayaa badi dabiiciga ah ee elementada. Tirada tirada atomiga ah ee isotope ee hydrogen oo loo yaqaan protium waa 1, halka tirada tirada ee isotope-ka ee loo yaqaan 'deuterium' oo loo yaqaan 'deuterium' waa 2, weli masska atomigu wuxuu ku qoran yahay 1.008. Tani waa sababta oo ah walxaha dabiiciga ah waa isku dar ah isotopes.
Farqiga kale ee u dhexeeya wadaxaajoodka iyo naqshadaha iyo massaafka atomiga ayaa sabab u ah cillad ballaaran . In cillad ballaaran, qaar ka mid ah massmooyinka protons iyo nutrons waa la lumiyaa marka ay isku xidhaan si ay u sameeyaan nucleus a atomic. In cillad ballaaran, mass ee atom waa ka hooseeya tirada tirada cirib badan.
3 Noocyada Qalabka Intermolecular
Maxay Isku Khilaafsan Yihiin Molecule iyo Compound?
Liiska isbeddelka isdaba jooga ee u dhaxeeya Dawladaha Mawduuca
Killer Asteroids iyo Comets
Biology Prefixes iyo Suffix: arthr- ama arthro-
Raadi Kooxda Xirfadaha
Waa maxay sababta aadan u dhalin Karin Mercury
Waa maxay Farqiga u dhexeeya Sayniska adag iyo Sayniska fudud?
Immisa Oxygen Ayaa Hal Geedka Ah Ahaa?
Talyaaniga Xaalad Badan
Sidee loo sameeyaa xashiishad xayawaan lagu dhajiyo muraayadda indhaha?
PETIT - Magaca Magaca iyo Taariikhda Qoyska
Hordhaca Sicirada Sarrifka
Tommy Bolt: Goolka 'Hirgeliye' ee Gawaarida Kusoo Dhacay
Baro celceliska dhibcaha SAT ee Qaran ee 2013
Juquraafi ah Decline
Qormooyinka loo yaqaan 'Millard Fillmore': Madaxa 13aad ee Maraykanka
Cómo emigrar sharci ah a los Estados Unidos
Eeg Dabeecadaha iyo Dib-u-habeynta loogu talagalay Dhegeysiga Dhegeysiga
Sidee St. Jerome ugu tarjumay Kitaabka Quduuska ah
Saadaalinta Isirada Isbaanishka ee Falanqaynta
Sidee Ayay Ugu Isticmaali Sahayda Ski-ga?
Tallaabo-tallaabo-tallaabo-tallaabo ah "Dhaqameed" (oo dulsaaran)
Qorshooyinka Xaaladaha Degdega ah ee Wacan (Emergency Plans) ayaa ka qaadi kara walwalka xaalad degdeg ah
Intee Ayuu Qaadaa Abaalmarinta Nobel Prize?
Qodobbada Halloween Funny
Ma tahay inaad noqotid Kaaliye Deggane Kulliyad ah (RA)?
Ku-dhir-galka Abaabulka Mawduuca Wax-ku-oolka ah